Ukuphenduka - IZifundo ZeBhayibheli
The ukuphenduka wase Bhayibhelini akubona isimo sengqondo egqugquzelwa komuntu. Luhlanganisa a life phambi kwabantu uthi esinye isici sokuphila Kobukristu, hhayi ukuphenduka kugqugquzelwa ivangeli. Ukuphenduka True uthi ushintsho design (Metanoia), ie, ushintsho ecabanga kanjani umuntu lithola insindiso Kankulunkulu.
“Ningacabangi nina, wathi, Sine-Abrahama uyise wethu…” (Mt 3: 9)
Ukuze kuzuzwe insindiso Kukristu kwakudingekile ushintsho olukhulu (olukhulu) endleleni yayo yokucabanga, lolu shintsho yayiyisikhulu uma bezwa isigijimi ivangeli futhi bakholwa Kukristu. The Ivangeli ezinhle esikhiqiza uguquko olukhulu endleleni siqonda insindiso. Lolu shintsho olukhulu ngokucabanga ukuthi ivangeli phansi kule ndoda eyayingaphandle ngaphandle Unkulunkulu okuthiwa Ebhayibhelini Wokuphenduka. Ukuphenduka ushintsho design, concept, mayelana nendlela umuntu lithola insindiso Kankulunkulu.
Ababhali abaningi Abafarisi beza Ukubhapathiza Kukajohane Umbhapathizi, kodwa ngisho nangemva kokubhapathizwa, namanje ememezela ukuthi bangabafokazi abantwana Bakankulunkulu ngokuba inzalo ka-Abrahama. Ujohane Umbhapathizi waphawula ngokusebenzisa lokho babethi abazange babe ukuphenduka okuqotho “Ningacabangi nje sithi Abrahama uyise wethu” (Mt 3: 9). It kwakudingekile ukuba ababhali Nabafarisi baphenduke of eyiphutha zabo mayelana nendlela basindiswe, okungukuthi, njengoba ingane Kankulunkulu. Ujohane Umbhapathizi ngokugcizelela, ngoba ngisho amatshe Unkulunkulu uyakwazi ukwenza izingane Abrahama, okungukuthi, ukwenza (ukudala) izingane kuye.
Kuyini umcabango sakho sensindiso? Wake ngizisole iqiniso? Wena esithela izithelo ezifanele ukuphenduka?
Ukuze uphendule futhi uhlole ukuthi ufinyelele ukuphenduka okuqotho, phawula okulandelayo:
a) Wonke amadoda baye baphenduka into benza okungalungile in the inkambo yokuphila kwakhe. Phendukani of zabo amaphutha, zengqondo, izinqumo, njll Kodwa ingabe lolu hlobo ukuphenduka lokunikezelwa Insindiso?
b) Umuntu owaphila ukuphila antule ukuzithiba yobugebengu, okuxekethile namanga, kodwa ngesikhathi bephenduka amaphutha (zengqondo) futhi iya bahlala Isigodlo, kwafinyelela ukuphenduka okuqotho?
c) Isakhamuzi abazinikezele ukuba baphile ukuphila ehlelekile emphakathini, ezenkolo, futhi isenzo esingekho emthethweni noma ekhubazekile, futhi nosizi kakhulu ngesenzo sakhe, befikile ukuphenduka kwangempela?
Ungenzi! Ingabe lezi zinhlobo nokuzisola ezichazwe ngenhla ukuthi Ujohane watusa! Lokhu kuphenduka egqugquzelwa komuntu yilokho Ibhayibheli elikubiza ukuphenduka emisebenzini efile.
The ukuphenduka Wasebhayibhelini akubona isimo sengqondo egqugquzelwa komuntu. Ukuphila ubuqotho phambi kwabantu uthi esinye isici sokuphila Kobukristu.
Ukuphenduka True uthi ushintsho design, ie, ngo ukucabanga nendlela kuzuzwe insindiso Kankulunkulu.
Ukuze Abafarisi nababhali kwakunganele ukucabanga ukuthi babengabantu abantwana Bakankulunkulu ngokuba inzalo ka-Abrahama “Ningacabangi nina, wathi, Sine-Abrahama uyise wethu” Mathewu 3: 9 Ngokuba Rich Young uMbusi kwaba akwanele ukufeza umthetho noma ukwenza okuthile insindiso “Mfundisi omuhle, buhle buni okumelwe ngiyenze ukuze abe nokuphila okuphakade?” (Mathewu 19: 16). Unikodemu Kwakunganele ukuba umahluleli, master, Abafarisi, Jewish, njll “Kwakukhona umuntu othile Kubafarisi okuthiwa Unikodemu, umbusi Wamajuda” (Johane 3: 1).
UPetru, ekhuluma ukuphenduka, wanxusa amaJuda ukuba ashintshe ukucabanga kwabo futhi luvo mayelana noKristu ngubani esiphambanweni. Kungemva kokuba Amajuda akholelwa Ukristu Njengenkosi Inkosi aphendukayo Empeleni (izenzo 2:38).
Qaphela ukuthi Ujohane Umbhapathizi akazange amthethise Abafarisi nababhali amaphutha they bophezela. Ngaphambi, kufanele baphenduke ngoba, okuwukuthi, ngenxa budebuduze Umbuso Kankulunkulu, Engukristu phakathi kwamadoda “Phendukani, ngoba umbuso wezulu” (Mt 3: 1 -2).
The mission of Ujohane Umbhapathizi Wayengueliya lokhu: ukulungiselela indlela Yenkosi, okungukuthi, umemezele emadodeni ukuthi kwakudingeka bahlukane umcabango wabo kanjani ukuba basindiswe, futhi wamukela UKRISTU.
Ngesinye isikhathi ujesu wakhuza abanye abafundi ababenolwazi akukho ukuphenduka okuqotho. Qaphela ukuthi lezi abafundi babekholelwa Kukristu, kodwa babethemba ukuthi ebakhipha ngokuba inzalo ka-Abrahama. Kwase ukuphenduka okuqotho, ngoba babesayenza unamathele umqondo elidala kanjani ukufeza insindiso Kankulunkulu.
“Ujesu wathi kulabo Kubajuda bakholwa kuye, Uma nihlala ezwini lami, ningabafundi bami the ukwazi iqiniso futhi neqiniso liyakunikhulula Bathi.. Thina siyinzalo ka-Abrahama futhi awakaze izigqila umuntu” (Johane 8: 11 -34).
Lawo Majuda ayengamshiyanga baphenduka. Kwakumelwe abalandeli ezilula zikakristu, ngenxa isinkwa, izimangaliso, lenkosi, njll Kodwa, lapho abamangalelwa ukuthi ukuba abafundi beqiniso kwakudingeka ukwazi iqiniso, okungukuthi, ukushiya ukungazi isono (ukuphenduka), wabonisa lokho kwaba umcabango wabo insindiso: bathembela ukuzidla yabo siqu, ukuthi babengabantu inzalo ka-Abrahama.
Abalandeli Bakakristu (Amajuda ababekholwa nguye) kwakukhona isimo esifanayo nababhali Nabafarisi ababengamadoda Ukubhapathiza Kukajohane Umbhapathizi; babethemba ukuthi insindiso wafika evela isizukulwane (inzalo) of Abraham (Mt 3: 9) qhathanisa kanye (Johane 8:33).
Ngakho uma kambe ukukholwa kwenu Kukristu njengoba umsindisi wakho ekukuphela, futhi washiya ukukhulelwa elidala kwaba imihlatshelo kudingekile, imithandazo, kwezijeziso, umsuka, abahluphekile, inkolo, njll, ukuze basindiswe, ufinyelele ukuphenduka okuqotho. Ingabe usuphendukile Empeleni, kwaba khona ushintsho kwengqondo okulethwa ukwazi ivangeli eyakhulula ekungazini yesono.
Ngoba usuphendukile manje ngobuqotho ukuba bazishaye igama Kristu umsindisi kuphela, wena akhiqiza izithelo ezifanele ukuphenduka, okuwukuthi, isithelo sezindebe abavuma Ukristu abe Yinkosi (Izenzo 4:12; Heb 13:15 ).
Kuphakama iphutha ukuphenduka ekuchazweni of the vesi: “Mkhiphele izithelo ezifanele ukuphenduka” (Johane 3: 8), lapho kulala ukuthi ‘izithelo ezifanele ukuphenduka’ libhekisela ekuziphatheni kwabantu. Qaphela ukuthi isithelo Ujohane Umbhapathizi wathi uthi lokho umuntu othi mayelana nendlela eyodwa lithola insindiso, kusukela ngaleso sikhathi ufika ukucabangela of the Abafarisi nababhali.
Kungani lokho omunye othi (izithelo) ubufakazi uma yena baphenduka noma cha? Ngenxa yokuziphatha uyinto yangaphandle, ukuthi akukho bufakazi lokho inhliziyo yomuntu. Qaphela ukuthi abaprofethi bamanga bezifihle njenge- zimvu (ukuziphatha), kodwa ngaphakathi basuke ravening ezimpisini, futhi kuphela ngezithelo zabo (okuyinto bazibiza) ingabhekana nabo (Mt 7:15 -16).
1) Uyini ukucabanga ababhali nabaFarisi zendlela yokufinyelela insindiso? (Mt 3: 9)
Babecabanga ukuthi kwanele ukuba ozalweni luka-Abrahama (in the inyama indodana) ukufinyelela amadodana saphezulu.
2) Yisho izibonelo ezine ‘ukuphenduka’ ukuthi alikukhuthazi insindiso:
Phendukani ube nengxabano nomyeni wakhe; baphenduke baziphathe kabi esikoleni; baphenduke hhayi isinqumo esibalulekile ekuphileni; baphenduke sokuba ivinjelwe kusiza umuntu.
3) Iyini baphenduka ukuze basindiswe?
sishiye imiqondo ubudala zendlela yokufinyelela insindiso futhi amukele imfundiso kaKristu.
4) Yini insizwa ecebile babecabanga kwakudingeka ukuba basindiswe?
Ingabe abanye ‘okuhle’ Kunkulunkulu.
5) Isiphi iseluleko uPetru kumaJuda esiphambanweni iNkosi uJesu?
Phendukani, noma balahle imiqondo mayelana ubulungu in the inyama ka-Abrahama umthetho kaMose, futhi zibhapathizwe egameni likaJesu (IzEnzo 2:38).
6) Isiphi iseluleko uJohane uMbhapathizi wanika ababhali nabaFarisi basindiswe?
Ungacabangi ukuthi nje ukusho, sinawo Abraham Ubaba. Phendukani, noma balahle lo mqondo!
7) Njengoba ikholwa yeqiniso iveza izithelo ezifanele ukuphenduka?
Ukuvuma Ujesu njenge Nkosi kwakho ngokuvumelana neqiniso Okusebhayibhelini.
← Kungani Unkulunkulu afaka umuthi wokwazi okuhle nokubi phakathi nensimu?